:: My Little World ::: ရွက်လှေများ - ဂျူး
အလုပ်လုပ်ရင်း စာအုပ်တစ်အုပ် ပြန်ဖတ်ကြည့်ချင် စိတ်ပေါ်လာတယ်။ အဲဒီစာအုပ် PDF အနေနဲ့ကျွန်မ မှာရှိတာ သေချာတယ်။ ဘယ်နေရာမှ သိမ်းထားလဲ မသိဘူး။ အလုပ့် ကွန်ပြူတာက e-Book Folder မှာ ကြည့်တယ် မရှိဘူး။ အဲဒီစာအုပ်ကို အလုပ်လုပ်ရင်း ခုချက်ချင်းဖတ်မရပေမယ့် အိမ်ရောက်တာနဲ့ ဖတ်ချင်လို့ရှိတယ်ဆိုတာ သေချာချင်တယ်။ မရှိရင် Google လုပ် ရှာထားရမယ်။ ရှိခဲ့တာ သေချာတယ်။ ဒီဘလော့မှာများ မှတ်ထား၊ မျှဝေ ဖူးသလား။ Label - Book ကို ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။
တချို့ စာအုပ်တွေက ကိုယ်ကြိုက်လို့ မှတ်ထားတာဆိုတော့ ဘယ်နှစ်ခါ ဖတ်ဖတ် မရိုးနိုင်ဘူး။ လွယ်လွယ်ကူကူဖတ်လို့ ရတဲ့ ၀တ္ထုတိုတွေ၊ ကာတွန်းတွေကို တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်း ပြန်ဖတ်ရင်း... ၂၀၀၇ - ဂျူလိုင် က မှတ်ထားတဲ့ ဂျူးရဲ့ ရွက်လှေများ ထဲက စာပိုဒ်တစ်ချို့ ကို ပြန်ဖတ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဂျူး ရဲ့ ရွက်လှေများ - Posted at July 2007
၀တ္ထုတို တစ်ပုဒ်လုံး အပြည့်အစုံ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တာတွေပဲ မှတ်ထားဖြစ်ခဲ့တာကို။ ကြိုက်တာပဲ ရွေးမှတ်တာ ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် တစ်ပုဒ်လုံး ပြည့်စုံတာ ပိုသင့်တော်မယ် ထင်မိသည့် အတွက်...
Posted by Nay Nay Naing at 7/08/2010 12:34:00 PM
I like Jue . Thanks for sharing this.
i love juu
“ ကျွန်မ၏ရွက်လှေပေါ်မှာလည်း လိုချင်၍သယ်ယူခဲ့သော ပျော်ရွှင်မှုများ၊ မလိုချင်ပါဘဲနှင့် လက်ခံယူခဲ့သည့် အမှားများ၊ လွှင့်ပစ်လို့ရလျှင် ချက်ခြင်း လွှင့်ပစ်လိုက်ချင်သော နောင်တများ.. စသည်ဖြင့် ကုန်စည်ပစည်းများလည်း အသင့်အတင့် စုံခဲ့ပြီ။ ”
အဲ့နားလေး အကြိုက်ဆုံး နေနေရေ..။ လိုချင်တာတွေလဲ မက်မက်မောမောသယ်လို့ မလိုချင်တာလဲ တရွတ်တိုက်ပါလို့...